Umgangatho ophezulu we-Titanium-efakwe i-hexagonal shank eyandisiweyo intambo enqamlezileyo unxantathu we-drill Umthengisi kunye neNkonzo | Jiali
I-Titanium-ifakwe i-hexagonal shank eyandisiweyo intambo yomnqamlezo unxantathu
Umzimba we-U-groove drill: umphezulu womzimba we-drill-proofed rust, okwenza ukuba kube lula ukubhola.
Isibambo sikanxantathu esichasene nokutyibilika: uyilo olulodwa lonxantathu wesiphatho, ubambe i-drill yombane kwaye uqinise ngaphandle kokutyibilika.
Intloko ye-alloy cutter ekumgangatho ophezulu: I-drill bit yenziwe nge-alloy material eqinile kwaye ehlala ixesha elide, kwaye ukuqina kuphezulu kunoko kwe-drill bits eqhelekileyo.
Intloko ye-alloy cutter enzima akulula ukuyiqhekeza: izixhobo ezikhethiweyo eziphezulu ze-alloy, ukuxhathisa okuphantsi, kunokusebenza kwiglasi, umthi, ipleyiti yentsimbi, ikhonkrithi kunye nezinye izinto, kwaye ugcine umzamo.
Inkqubo eyohlukileyo ye-angle ye-angle blade grooving: Ukudibanisa iimpawu ze-ceramic drill bits kunye ne-electric hammer drill bits, ukwamkela uyilo olukhethekileyo lwe-angle ye-angle yecala elingunxantathu, i-grooving yenziwa kwi-drill bit, ekulungele ngakumbi ukukhupha uthuli kwaye iphucula kakhulu ukusebenza kakuhle.
Uyilo lwefluti yetshiphu enemisonto ephindwe kabini emilise u-U: Ifluti emile okwe-U igudileyo kwaye ithe tyaba ngaphandle kokuncamathela kwisixhobo, esinceda ekusebenzeni ngesantya esiphezulu kunye nokususwa kwetshiphu ngokukhawuleza. Umphezulu womzimba we-drill uphantsi ngokungenaziko kunye nonyango oluchasene nomhlwa, ukuze iitshiphu zokomba zisuswe ngokutyibilikayo.
Uyilo lweshanki oluchasene nonxantathu oluchasene nonxantathu: I-shank ye-drill yombane inqunyulwe kwimilo engunxantathu, eyenza ukubamba i-drill yombane ikhuseleke ngakumbi kwaye ayityibiliki.
I-YG6 i-alloy eqinile (i-tungsten steel) imathiriyeli, ebukhali kwaye ayigugi, amaxesha amaninzi yomelele kunezivula zemingxuma eziqhelekileyo. Ifanelekile: ukugrumba iindawo zokusebenza eziqinileyo nezibhityileyo njengeglasi, iiseramikhi, iithayile zeeramic kunye neendonga zezitena.
Itekhnoloji ye-Titanium: umphezulu we-electroplated kunye ne-ionic film layer ye-titanium compound, enobulukhuni obuphezulu, i-anti-friction, akukho kuxobuka, akukho kuphelelwa, kwaye ineempawu ezithile zokuchasana ne-oxidation kunye ne-anti-corrosion.
Umqheba oHexagonal: ulungele ukusetyenziswa kwizikrwelo zombane, uqheliso lwezandla, kunye neempembelelo zokuqhuba, kulula ukusebenza kwaye akukho lula ukutyibilika.
Le mveliso inokufakwa kwi-drills yombane kunye nezitshixo zombane. Inokusetyenziswa kwiiseramics, iiseramikhi, iithayile, ilitye, iglasi, umthi, iplastiki, iindonga zezitena, neendonga zesamente. Lumsebenzi oneenjongo ezininzi kumakhaya.
Uqheliso lukanxantathu olunemisonto
I-multi-function alloy triangle drill, iinkcukacha ezininzi ziyafumaneka
Ifanele iglasi / ithayile / umthi / iplastiki / ikhonkrithi kunye nezinye izinto
Uyilo lwetshiphu ekhethekileyo, ukukhutshwa kwetshiphu egudileyo
Ukugqobhoza kumngxuma okulula
Intloko yeCarbide cutter, isantya sokumba ngokukhawuleza. Uyilo olukhethekileyo lwe-angle ye-engile yeblade engunxantathu inokuwufumana lula umngxuma wokomba, iphucule kakhulu ukusebenza kakuhle kokugrumba kunye nokusebenza kokomba kugqwesileyo ngakumbi.
Ukukhethwa komgangatho ophezulu we-tungsten steel alloy forging
Ukusebenza okugqwesileyo, okusebenzayo kunye nokonga umsebenzi wokomba
Ihlala kwaye kunzima ukuphuka
Inoluhlu olubanzi lokusetyenziswa, kwaye ingasetyenziselwa imisebenzi yokomba efana nomhlaba / udonga lwezitena / iglasi / ikhonkrithi / ibhastile
Ngaphambili: Isivuli somngxuma we-alloy womgangatho ophezulu
Okulandelayo: Umngxuma ophakathi kuluhlu olwandisiweyo lokuvula umngxuma wengxubevange
I-Bimetal Hole Opener ene-Round Shank kunye neSiko...